Kunyamalale uthisha 'eyogwazela umhloli' - Ilanga News
Home Izindaba Kunyamalale uthisha ‘eyogwazela umhloli’
Kunyamalale uthisha ‘eyogwazela umhloli’
Kuthiwa umndeni ushaqe izingane wahamba nazo ngoba usola yena emuva kwengxabano abebenayo
UMNDENI kathisha onyamalele uhlasele umyeni wakhe, umsola ngokunyamalala kwendodakazi yawo osekuyophela amasonto amabili ingaziwa, ngemuva kokuphuma emzini wayo, eTafelkop, ngasePinetown, ithe iyohlangana “nomhloli” oyisize ukuthi iqashwe ngokugcwele esikoleni esebenza kusona. Umndeni kaNkk Sebenzile Thabethe, uMaTembe (36), (osesithombeni) waKwaMhlabuyalingana, eManguzi, obesenomuzi eTafelkop, kuthiwa utheleke emzini wakhe nomyeni uMnu Bonga Thabethe, ngoLwesine ubhodla umlilo, uthi kumele (umyeni) akhombe lapho emgqibe khona udadewabo.
Ngokuthola kwaleli phephandaba, ukunyamalala kukaNkk Thabethe, kuyindida kulo mndeni othi bekuvele kukhona ukubuye bangahlalisani kahle nomyeni. Abafowabo abane (bakaNkk Thabethe) kuthiwa batheleke emzini kadadewabo beyofuna izimpendulo kumyeni wakhe, baze bathi makabakhombise ukuthi umfihle kuphi ngoba sebekhalela ithambo lakhe. ILANGA lihambele emzini walaba ngoLwesihlanu, laxoxa noMnu Thabethe, obebonakala esakhungathekile ngoba osibari bakhe kabagcinanga ngokumfuna amathambo enkosikazi yakhe, bashaqe nabantwana babo ababili ngaphandle kwemvume yakhe.
Uthe usakhungathekile ngoba izingane ubeziyise kubo ukuba abazali bakhe bambhekele zona, ngoba yena nomphakathi bebe-vuka bayocinga inkosikazi ezindaweni ezingalapho behlala khona. “Inkosikazi yami ithole isikole eMbumbulu yaba nenkinga yokuthi bekuphoqa ukuthi ingahlali ekhaya. Igcine ithola isikole esiseduze nasekhaya, eTafelkop Primary, nakhona bekunezinkinga kuthiwa kakufanele ngabe
ifundisa kuleso sikole. Ngesikhathi kuqala uNdasa (March), ibe isiqashwa ngokugcwele kulesi sikole. Kwasijabulisa lokho ngoba ibisikwazi ukulala ekhaya kwazise sinengane esencane, enezinyanga ezine,” kusho uMnu Thabethe. Uthi ngoLwesithathu ubuye emsebenzini inkosikazi yamtshela ukuthi ifonelwe “ngumhloli” othe mayilethe u-“drink” ngokuqashwa kwayo kulesi sikole ngoba nguyena owenze lokho.
“Ibe isivuka ngoLwesine lwangomhla ka-31 kuNdasa, yahamba nemali engango-R6 000 ebesiyihlanganisile izofike ikhiphe u-R1 000 bese iyonika lo “mhloli”. Ihambe ekhaya kuyoshaya o-6 ekuseni ngoba ithi iyaphuthuma bayohlangana eSiphingo. “Ngoba nami ngisebenza eSiphingo, ngithe umama makangilinde, wathi uzoshaywa yisikhathi. Ngiye emsebenzini, okuthe ngaphambi kokuba kushaye u-8 (ekuseni) ngingene, ngamfonela, wangaluphendula ucingo,” kusho yena. Ngezikhathi zasemini uthi uphinde wamshayela ucingo obelukhala lungaphendulwa, washayela omunye wodadewabo (kamakoti) emtshela ukuthi uzama ukuthola inkosikazi, kodwa akayitholi.
Uthi udadewabo uzamile ukumshayela naye wangamthola.
“Ngimshayele ucingo ngo-4 ntambama ucingo belusakhala, ngithe sengifona ngabo-16h30 bese luvalekile. Ngibuyele ekhaya ngafika engekho okuthe uma sekuhlwa, ngafonela omunye wothisha ongumngane wakhe, ngimbuza ngaye, wangitshela ukuthi ubemtshele ukuthi uzoya kohlangana “nomhloli”. “Lowo mhloli abesho isibongo sakhe, ngimfonelile, wathi akayazi le nto engikhuluma ngayo,” esho. UMnu Thabethe uthe icala lize lavulwa ngoMgqibelo mhla zimbili kuMbasa (April). ILANGA lifike uMnu Thabethe esephuma emaphoyiseni eyobika ukuthi osibari bakhe sebefike bathatha izingane zakhe ngaphandle kwemvume yakhe.
“Ngithe ngisahleli nabo bengivalele kwenye indlu lapha emzini wami, bethi kakuphumi muntu ngingabakhombisanga ithambo likadadewabo, kwangena abazali bami. Ngithe ngisahambise abazali bami ekhaya, basala bamba imisele egcekeni okuthiwa bebebheka ukuthi hleze ngimgqibe kuyona. “Ngibuye kwami sekukhiyiwe nezingane zingasekho, u-anti osigadela zona engasabonwa. Ngithe uma ngimfonela, wathi osibari bami bathe makagoduke iziingane bayazithatha,” esho. “Sinengane eneminyaka engu-11, nenezinyanga ezine, kangikwazi nje ukudla amaholide nomndeni wami. UKhisimusi ngisawudle kanye naye, okuyinto ebesiyibanga. Njalo ekupheleni konyaka uyagoduka ngigcine ngingabi nesikhathi naye nezingane,” esho.
Eyokuxabana aze amshaye ngaphambilini akayiphikanga. Uthe inkosikazi yakhe yaze yambizela amaphoyisa kodwa bazilungisa izinto, baxolelana. ILANGA lixhumane noMnu Mzwakhe Tembe, ongumfowabo kaNkk Thabethe, ovumile ukuthi bazithathile izingane. “Sizibeke kudadewethu. Kasinankinga uma amaphoyisa engaqinisekisa ukuthi ziphephile. Sisabile ukuzishiya naye sibe sisenemibuzo engakaphenduleki,” esho. Izolo ngeSonto, ILANGA likhulume noMnu Thabethe, esesemakhazeni asePinetown, eyobheka isidu-mbu okuthiwa ngesowesifazane sitholwe eZwelibomvu kodwa besinezicubu ezingaphelele futhi sishisiwe. Uthe uzibhekile izinsalela zaso, wathi akukho okukhombisa ukuthi ngesenkosikazi yakhe noma cha. Kuthiwa kuzokwenziwa ulibofuzo. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLeutenant-Colonel Nqobile Gwala, uthi amaphoyisa aphenya icala lokulahleka komuntu.
Previous articleIKHALISA OTHISHANHLOKO “EYOKWEHLISWA”
KWEMALI YOHLELO LOKUDLA EZIKOLENI
Next articleBanengcindezi yokulanda izidumbu abangcwabi